Kutheni i-Crainduoo -Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
I-DG4Pros -Ikhamera ye-drone ye-drone ye-drone epheleleyo
Iskena sedatha eskena ngaphambi kweSoftware
Funda ukusebenza kwimizuzu eli-10>
Umgangatho ophezulu womfanekiso kunye nokuchaneka>
Yomelele kwaye ikhuselekile>
Inokudityaniswa kunye neendidi ezininzi zeedrones>
Umenzi wekhamera omkhulu wase-China oblique
Isungulwe ngo-2015, imvula ibigxile ekufotweni kwe-oblique kangangeminyaka emi-5 nangaphezulu. Inkampani iqokelele inani elikhulu lobuchwephesha kumacandelo e-optics, inertial navigation, photogrammetry, kunye nokulungiswa kwedatha yendawo. Ngaphezulu kweeyunithi ezingama-500 ezithengisiweyo ngonyaka, amashishini angama-2500 + athemba iRainpoo.
Eyokuqala ukumilisela iilensi ezintlanu zekhamera ye-oblique ngaphakathi kwe-1000g (D2), emva koko i-DG3 (650g), emva koko i-DG3mini (350g). I-Rainpoo isazama ukwenza iimveliso zibe lula, zincinci, zisebenzisane ngakumbi, kwaye kulula ukuzisebenzisa.
Into ekufuneka siyenzile kukugqwesa ihlala IZITHU, kwaye asisoze SAYEKA.
Ikhamera enye, iilensi ezintlanu. Olu manyano lukuvumela ukuba uqokelele iifoto kwiindlela ezintlanu kwindiza enye. Kwaye iRainpoo iphuhlise ngobuninzi isoftware yokuxhasa kunye nezixhobo, ezingagcini nje ukugcina ixesha lomsebenzi weenqwelomoya ze-UAV, kodwa kunye nokugcina ixesha ledatha yokulinganisa isoftware ye3D. .
Jonga "Izinto ezincedisayo" ukufumana indlela yokusebenzisa izinto zokonga ixesha lakho>
Uyilo lweemodyuli lwenza kube lula nakubani na ukuba afunde ukufaka kunye nokusebenzisa iikhamera. Isoftware ekrelekrele ikuvumela ukuba ukhuphele iifoto ngonqakrazo olunye.
Ngokuzimeleyo kuphuculwe iilensi ezibonakalayo.I-Gauβ eyakhelwe-ngaphakathi kunye nokusasazeka okungaphezulu kwe-Aspherical lens, enokuthi ibuyekeze ukuphambuka, inyuse ubukhali, ukunciphisa ukusasazeka kunye nokulawula ngokungqongqo izinga lokugqwetha elingaphantsi kwe-0.4%.
Funda ngakumbi malunga nomgangatho womfanekiso kunye nokuchaneka>
Kutheni le nto ukungqamanisa kweelensi ezintlanu kubaluleke kakhulu? Sonke siyazi ukuba ngexesha lokubhabha ngenqwelomoya, kuya kunikwa umqondiso kwi-lens ezintlanu zekhamera ye-obique. Kwithiyori, iilensi ezintlanu kufuneka ziveliswe ngokulandelelana, kwaye idatha ye-POS iya kurekhodwa ngaxeshanye, kodwa emva koqinisekiso lokwenyani, sifike kwisigqibo: eyona nto inzima ngakumbi ulwazi lokuyilwa kwendawo, isixa esikhulu sedatha ilensi ingasombulula, icinezele, kwaye igcine, kunye nexesha elingaphezulu lokugqibezela ukurekhoda. Ukuba isithuba esiphakathi kwemiqondiso eshukumisayo sifutshane kunexesha elifunwa yilensi ukugqibezela ukurekhoda, ikhamera ayizokwazi ukwenza ubhengeza, nto leyo eya kukhokelela "kwifoto engekhoyo" .BTW, ungqamaniso nalo lubaluleke kakhulu uphawu lwe-PPK.
Funda ngakumbi malunga nokuvezwa kokuvumelanisa>
Iqokobhe elenziwe ngemagnesium-aluminium alloy lisetyenziselwa ukukhusela iilensi ezibalulekileyo, kwaye ngenxa yokuba ikhamera yona ilula kakhulu kwaye incinci, ayinakufane ibangele umthwalo ongaphezulu kwiidrone. Kwaye ngenxa yoyilo lweemodyuli (umzimba wekhamera, iyunithi yokuhambisa kunye neyunithi yolawulo yahlulwe), kulula ukuyitshintsha okanye ukuyigcina.
Nokuba yi-UAV ejikelezayo, iphiko elingashukumiyo, okanye i-VTOL, iikhamera zethu zinokudityaniswa nazo kwaye zilungiselelwe ngokwezicelo ezahlukeneyo.